Fetiben'ny mozika iraisam-pirenena ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Fetiben'ny mozika iraisam-pirenena ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh
Kolontsaina • fampiasam-bola • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
42100 309qdngethuatduongpho6a 4read ihany 1569852298416497470050 9 1
Departemantan'ny kolotsaina, fanatanjahantena ary fizahan-tany ho an'ny tanànan'i Ho Chi Minh City Hò dô 2019 (HOZO), festival mozika iraisam-pirenena.
Ity festival ity dia ao anatin'ny drafitra fampiasam-bola stratejika HCM City hampivelatra ny indostrian'ny kolontsaina ao an-tanàna hatramin'ny taona 2020 ary hotontosaina ny 13-20 desambra miaraka amin'ny firenena 10 miseho.
Ny tanàna HCM dia efa noheverina ho toerana misy ireo hetsika mozika mahafinaritra indrindra eto amin'ny firenena. Na izany aza, maro ny mponina no tsy nanana fotoana niainany ny tena fanahy tokony hananan'ny fety.
Nandritra izay 10 taona lasa izay, mpitia mozika maro no tsy afaka nirehareha Giai Điệu Mùa Thu (Autumn Melody), festival iray natokana ho an'ny mozika kilasika.
Araka ny nambaran'ny talen'ny lefitry ny departemantan'ny kolontsaina, fanatanjahantena ary fizahan-tany HCM, Nguyễn Thị Thanh Thuý, HOZO dia hanolotra fotoana sarobidy ho an'ny mozika nentin-drazana hifangaro amin'ny mozika maoderina, hampiely ny lanjan'ireo mozika nasionaly sy kolontsaina amin'izao tontolo izao.
Fampisehoana isan-karazany hatolotra, manomboka amin'ny jazz sy pop ka hatramin'ny mozika nentim-paharazana. Ahitana mpanakanto avy any Frantsa, Belzika, Espana, Rosia, Japon, Korea atsimo, Aostralia, Gresy, Kiobà ary Việt Nam ny laharana. Ny mponina eo an-toerana dia afaka mankafy hetsika mozika ary koa fampirantiana sy saran-tsakafo amin'ny fety.
Entanina ireo tarika tanora avy amin'ny lafivalon'ny firenena handefa ny seho an-tsehatra amin'ny alàlan'ny https://hozomusicfestival.com ho an'ny vintana voafantina ary hiaka-tsehatra miaraka amin'ny laharana iraisam-pirenena mandritra ny festival.
Huy Tuấn, mpitendry mozika sy talen'ny zava-kanto amin'ny festival dia nilaza fa ny tanàna rehetra dia tokony hanana festival amin'ny mozika, indrindra ny HCM City, satria izy no tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena ary manana tsenan-kira isan-karazany.
Ity festival ity dia ahafahan'ny mponina ao an-toerana mahita karazana mozika sy mpanakanto samihafa ary manome azy ireo fotoana hiarahana amin'ny namany sy ny fianakaviany amin'ny hetsika mahafaly, hoy i Tuấn.
eTN Tantano ny tonian-dahatsoratra.